भगवानसँग किन डराउँछन् मान्छे ? - भगवानसँग किन डराउँछन् मान्छे ? -
उज्यालो प्रतिनिधि १३ पुष २०७८, मंगलवार फोटो समाचार
काठमाण्डौं । वास्तवमा हामी डरपोक छौ । डराएका छौ । भयाभित छौ । त्यही डर एवं भयाबाट मुक्ति पाउनका लागि भगवानको शरणमा पर्छौ ।हामी मन्दिर धाउँछौ, यसकारण कि भगवनले कृपा गरोस् । हामी पूजाआजा गर्छौ, यसकारण कि, भगवान खुसी भइदियोस् । हामी उपवास बस्छौ, यसकारण कि भगवान सन्तुष्ट भइदियोस् । हामी धूपबात्ती बाल्छौ, यसकारण कि भगवानले गुनासो नगरोस् । हामी फूलप्रसाद चढाउँछौ, पूजाआज गर्छौ, यसकारण कि भगवानले चित्त नदुखाइदियोस् ।
मन्दिर धाइरहेका एउटा व्यक्ति वास्तवमै डराएका हुन्छन् । उनलाई डर हुन्छ कि, मैले कुनै गल्ती(कमजोरी पो गरे कि ? उनलाई डर हुन्छ कि, कतै मेरो बिधी(विधान नपुग्ने पो हो कि ? उनलाई डर हुन्छ, कतै मेरो ढंग पुगेन कि ?
यसको अर्थ यो होइन कि, मन्दिर धाउनु हुँदैन । पूजाआजा गर्नु हुँदैन । देवी(देवताप्रति आस्था राख्नुपर्छ । घण्ट(शंख बजाउनुपर्छ । आरती एवं प्रार्थना गर्नुपर्छ ।